खाडी र युरोप जाने नेपालीको मन एउटै हुनुपर्ने होइन र? :: Setopati
खाडी र युरोप जाने नेपालीको मन एउटै हुनुपर्ने होइन र?
कान्ति न्यौपाने जेठ ४
आफैँलाई प्रश्न गरेँ, अनि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा कविता पनि याद आयो- 'म मेरो घरको राजा झुपडी नै भएपनि' भन्ने। हो त, हामी नेपालीको आफ्नै पहिचान छ, आफ्नै स्वाभिमान छ, मुलुक गरिब भयो भन्दैमा उसको अस्तित्व नहुने होर?
नेताहरुलाई ठूलो स्वरमा गाली पो दिन थाले। एकछिनमै भने- 'हाम्रो प्रधानमन्त्री खत्तम छन्, उनी नागरिकलाई अम्बाको पात खाउँ भन्छन्, बेसार पानी खाउँ भन्छन्। आफू अनावश्यक राजनीति गरेर बस्छन्, नागरिकको वास्ता गर्दैनन्, नागरिकहरु पनि उत्तिकै लापरबाही गर्छन्। अन्य राजनीतिक दलका मानिसहरुलाई त झन् वास्तै छैन, यो गरिब देशहरुको समस्या नै यहीँ हो।'
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ४, २०७८, ११:५४:४१